Xaflad Lagu Daah Furay Ol-olaha Talaalka Kahortaga Cudurka Tetanada - Cakaara News
Xaflad Lagu Daah Furay Ol-olaha Talaalka Kahortaga Cudurka Tetanada
Jigjiga(cakaaranews), talaado, 23da August, 2016, Xaflad lagu daah furay ol olaha talaalka ka hortaga iyo cidhib tirka cudurka teytanada/kojisada oo laga talaalayo haweenka da-doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 ayaa ka dhacday xarunta maamulka xaafada 10aad ee maamulka magaalada jigjiga.
Xafladan oo uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI ayaa waxa ka soo qaybgalay wasiirka caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil cali, afhayeen ku xigeenka Golaha xildhibaanada DDSI marwo Fardawsa Maxamed Muxumed, agaasinada iyo shaqaalaha xafiiska caafimaadka DDSI, masuuliyiin ka socotay hay’daha ay xafiiska caafimaadka DDSI habwadaagta yihiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafada 10aad ee mm jigiga.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay xafladan wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil Cali oo ka warbixiyay ahmiyada uu leeyahay talalkan ka hortaga iyo cidhibtirka cudurka teytanada/kojisada. Wasiirka ayaa sheegay in uu yahay talaakani kii lagu xaqiijin lahaa cidhibtirka cudurka teytanada sidaasi darteedna muhiim tahay in ay ka faa’iidaystaan hooyooyinku mudata uu socto talaakani.
Waxaa kale oo ka hadashay xafladan lagu daah-furay ol-olaha talaalka afhayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada DDSI marwo Fardawsa Maxamed Muxumed oo si qoto dheer uga warbixisay ahmiyada uu talaalkan u leeyahay haweenka waxayna ka warbixisay in cudurkan ka hortagiisa lagu xaqiijin karo in ay haweenka qaataan irbada talaalka cidhibtirka cudurkan taytanada. Waxayna afhayeen ku boorisay in ay haweenku ka faa’iidaystaan talaalkan si looga midho dhaliyo xaqiijinta cidhibtirka cudurkan.
waxaana irbadii ugu horaysay ee talaalkan lagu talaalay afhayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada DDSI marwo fardawsa. Ka dibna wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI ayaa isaguna goobtaasi ku talaalay qaarka mid ah haweenkii xaflada ka soo qaybgalay.
talaalkan oo ah, midkii ugu danbeeyay ee lagu fulaniyo dalkeena itoobiya ayaa waxa uu yahay mid lagu xaqiijinayo cidhibtirka iyo ka hortaga cudurkan taytanada/kojisada. Waxaana deegaankeena laga fulinayaa 5 gobol oo ol-olahan wareegiisan 1aad laga fulinayo gobolada Faafan iyo Siti halka wareegiisa 2aadna laga fulinayo gobolada Liibaan, Afdheer iyo Shabeele. Waxaana talaakan qorshaysan in deegaanka laga talaalo haween ay tiradoodu dhan tahay 892,477 oo ay da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 49 jir, waana talaalka lagu xaqiijinayo in laga cidhib tiray dalkeena itoobiya cudurka taytanada/ kojisada.